Ginger iziphuzo kwesisindo hhayi kuphela
Namuhla, u-ginger iziphuzo kwesisindo zithandwa kakhulu. Ngu uqobo, Ginger 'wafika' ezivela eMpumalanga, kubhekwa lapho kwazalelwa eNdiya, nakuba likhula e China. Lesi sitshalo zokwelapha kabanzi njengendlela spice ekuphekeni. Ngisho nasezikhathini zasendulo ke kwaqashelwa ikhono layo ukuze kugayeke futhi ukusiza ekwelapheni izifo zemigudu yokuphefumula, kanye somoya. Ngaphezu kwalezi izakhiwo, ginger iyisici esisemqoka cuisine empumalanga. Ginger kungaba pickling, omiswe, yokuwugazinga, ukuphisa udle eluhlaza.
Ginger iziphuzo Ukudla zithandwa ngenxa yokuba khona kwama-carbohydrate e nezicubu impande, amafutha nokumbiwa nosawoti ezifana potassium, magnesium, i-calcium, okusansimbi, i-zinc, i-sodium, phenols, amafutha abalulekile, abanye amavithamini kanye ama-amino acid. Ginger impande has a isethi ezithile ngokubhukula nokuvikeleka ekuthuthukiseni izindawo. Ingase futhi ingasetshenziswa njengendlela isisu ebukhoneni enemata. Ginger isetshenziswa ubuthi futhi, njengoba isidambisa-zinhlungu futhi antiemetic.
Nokho, kanye nemiphumela ngenhla omuhle, kukhona ezinye Izimo ngokusetshenziswa kwayo. Ngokwesibonelo, u-ginger iziphuzo kwesisindo ayikwazi ukusetshenziswa ngesikhathi isilonda we emphinjeni kanye isisu, phambi yesihlabathi amatshe, noma kwesinye noma izinso, kanye ashisa kuphakame izinqubo ukuvuvukala. Lokhu kuhlobene okuqukethwe ngesikhathi kumile impande imbe ebabayo futhi amafutha abalulekile. Ephambi kwezinduna umfutho wegazi ophakeme, ephula inhliziyo ginger wokuphuzwayo kwesisindo ingasetshenziswa kuphela emva kokubonisana onguchwepheshe.
Ngenhloso zokwelapha, ginger ingasetshenziswa njengendlela itiye. Ikhono zishukumisa umzimba futhi kukhuthaza ka ezizivelelayo ngokweqile kanye ubuthi okwenza nje esisemqoka ginger wokuphuzwayo kwesisindo somzimba. Ungadliwa uqobo namuhla zingatholakala ngamanani amakhulu. Nasi eyodwa elula. Small ehlutshiwe impande ginger uthathe tincetu mncane futhi kukho 2 ugarliki lonke. Ngo thermos uthele ingxube ukuthi ezimbili amalitha amanzi abilayo futhi sokunika ihora nesigamu. Ngemva kwalokho, ukususa garlic kanye ginger baphuze izingxenyana ezincane usuku lonke itiye ngesimo ukushisa. garlic Ngenxa anisuthi isiphuzo ukunambitheka elungisiwe, lapho ngezinga elithile kuthuthukisa nomphumela ofiselekayo, lelindzeleke besifazane abasebenzisa ginger wokuphuzwayo neminye. Izibuyekezo ukuthi babeshaye esikhonkosini. Uma uphuza ke ngaphambi kokudla, kunciphisa umuzwa indlala, okuyinto enomthelela ukuqaliswa inqubo esebenzayo kwinkinga isisindo ingqikithi.
Ukuze uthuthukise ngempumelelo amasosha omzimba ginger isiphuzo itiye okulungiselelwe esusela impande fresh futhi omisiwe. Ngenxa yale njongo iyasikwa ibe tincetu nomzimba omncane, bagcwala amanzi abilisiwe amahora angaba mahlanu futhi asetshenziswe ngendlela ukushisa. ungakwazi ukwengeza lemon noju ukuze uthuthukise ukunambitheka. Kulesi itiye isinyathelo ngempela ezinqala, okuyinto kudala umphumela ngaphakathi ukufudumala. Nokho, ukujwayela ke, ungakwazi lizwakale futhi ngaphezu impilo jikelele zomzimba usengakwazi uthole injabulo ethile evela itiye.
Ukuvivinya umzimba ngendlela ngokumelene amafutha: mangaki ama-calories zishiswa ngenkathi ugibele ibhayisikili
Khetha umdlalo wakho ukunciphisa umzimba
"Ratsionika": ukubuyekezwa. Izinqubo okumelwe eziyinkimbinkimbi Racionika
Jump ngezintambo kwesisindo: indlela gxuma? Isethi umzimba
Ukulahlekelwa isisindo ngosizo ginger: kungenzeka?
"Oasis" - radiators: tinkhulumo, Ukucaciswa, ukubuyekezwa
Ukudla ngesikhathi Ebolekwe emini. Yini ukuba adle ngesikhathi Ebolekwe?
Sodium hydride. I izakhiwo kanye nencazelo isicelo.
Ukubuyisa Ukwandiswa: indlela yokugwema ukuqumba
Igumbi Monstera. Ukuveza kanye Ukunakekela
Indlela yokwenza elingaphakathi elibonisa isihloko business plan ukuheha utshalomali?
Imfundo Patriotic zasenkulisa izingane GEF: ukuqeqeshwa izihloko
Indlela ahlele ukugeza kuqala usana ekhaya